PAWS (သို့) အလွန်ဆိုးရွားသည့်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာသောစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆိုလိုသည်။ ကန ဦး ဆုတ်ခွာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်လများသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟူသောဝေါဟာရကိုပြောင်းလဲလာသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ဆေးလိပ်ဖြတ်သူအချို့သည်အလားတူဖြစ်ရပ်ကိုဖော်ပြကြသည်။ ဤအရာသည်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်တူညီသောအခြေခံ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသကဲ့သို့၊ ဆုတ်ခွာနောက်ထပ် neurochemical အပြောင်းအလဲများအပေါ်တတ်၏. ယက်အကြောင်းပိုမို Read ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲပြန်လည်နာလန်ထူ site ပေါ်တွင်။
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ညစ်ညမ်းပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ၏ယောက်ျားထိုကဲ့သို့သောအနိမ့်လိင်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်အဖြစ်လက္ခဏာတွေရှိနေဆဲဟုနှင့် lethargy ယက်-ဆက်စပ်ဖြစ်မည်အကြောင်းတွေးဆကြသည်။
၎င်းသည်အလွန်ဆိုးဝါးသောရောဂါများဖြစ်သည်၊ လုံးဝသံသယမရှိပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများ၏“ အပေါ်နှင့်အောက်” သဘောသဘာဝ၊ ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှေးကွေးသောသဘာဝနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုယ်တိုင်။ တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ရွှင်လန်းမှုများစွာကိုရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ပါ။ အခုငါဂီတကိုငါအရင်ကလိုခံစားလာနေပြီ၊ သူစိမ်းနဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုရုန်းကန်နေရမယ့်အစားသူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့စကားစမြည်ပြောနိုင်ပါပြီ။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့စုံတွဲနှစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော့်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ငါတကယ်တိုးတက်အောင်လုပ်နေတယ်။ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး rewiring ဆိုတာအရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းလို့ပြောသူတွေကိုပဲ့တင်ထပ်နေတယ်။ ပုံမှန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (ပုံမှန်အားဖြင့်အောင်မြင်တဲ့) လိင်ဖြစ်သည့်ငါ့ကောင်မလေးဆီကိုပြောင်းရွှေ့တာနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းသွားတာပိုပြီးရှင်းလင်းလာတယ်။
ရှေ့ကိုဆက်သွားနေ လင့်ခ် - ငါဂီတကိုထပ်ခံစားလို့ရတယ် သူစိမ်းတွေနဲ့စကားပြောရတာပျော်တယ် ကျွန်တော် ၁.၅ နှစ်ရှိပါပြီ
၂၀၁၂ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာကျွန်မတို့ပြိုကွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ဓာတ်ကျမှုမှကင်းဝေးသွားခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ဤအချိန်ကာလအတွင်း၌ porn ကိုကြည့်လိုသောဆန္ဒကိုဘယ်သောအခါမျှမရရှိနိုင်ပါ။ ဤအမှတ်တမဲ့ "Streak" အတွင်းတွင် PIED ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကုသခြင်းမှရရှိသော "စူပါအင်အားကြီး" များကလူအများဖော်ပြသောအရာများကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရသည်။ ငါလပေါင်းများစွာသာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပြည်နယ်ဟုခေါ်တွင်နိုင်သည့်အရာ၌ရှိ၏။
နောက်ဆုံးတွင်ထိုနှစ်သြဂုတ်လတွင်ကျွန်ုပ်သည်ယခုမှထွက်ခွာသွားသည့်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ ၏အနက်ရှိုင်းဆုံးအပေါက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသောအခါပျော်ရွှင်မှုသည်ရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ၎င်းသည်ကန ဦး "စူပါပါဝါ" ၏အဆုံးကိုရှောင်ခြင်းနှင့် porn ၏စူးရှသော - ဆုတ်ခွာခြင်း - ရုပ်သိမ်းခြင်း - syndrome ရောဂါစတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၏နိဂုံးလား။ အကယ်၍ ဂယ်ရီ၏သိပ္ပံပညာမှန်ကန်ပါကကျွန်ုပ်၏ကိစ္စရပ်၏အတိမ်အနက်နှင့်ကြာချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ရနိုင်သည်။
INSANE ၏လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုစတင်ခံစားခဲ့ရသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးနောက်တစ်ကြိမ် ထပ်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားသည်။ ငါကြိုးစားနေတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဒီအချိန်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတောင်မရနိုင်လို့ပါ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့ဒီကာလဟာမှုန်ဝါးနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မခံခဲ့ရလို့ပါ။ ငါ YBOP ကိုမတွေ့သေးဘူး
နောက်ဆုံးတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဇွန်လမှာဂယ်ရီရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတွေ့ခဲ့တယ်၊ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီး reboot ရဲ့အစပိုင်းမှာတခါတလေစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီး ၂၀% ပျော့ပျောင်းတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါဝေးလံခေါင်သီသောရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ပြင်ပသို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
ဇွန် ၁၃ ရက်မှဇွန် ၁၄ ရက်အကြား ၁.၅ လတခါငါရည်းစားကိုမြင်ခဲ့တယ်။ ငါတို့မှာလိင်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ အောင်မြင်မှုတချို့မအောင်မြင်ခဲ့ကြဘူး။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ဦး နှောက်မြူမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလူမှုရေးအရည်အချင်းမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားငါသုံးနှစ်နီးပါးကြုံတွေ့နှင့်အပေါ်ခံစားခဲ့ရလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငါအော်ဂဇင်ပြီးနောက်ပိုကြီးတဲ့အတက်အကျသတိပြုမိသည်။ ငါ reboot ဖြစ်စဉ်ကိုနှင့် PIED သိပ္ပံသံသယစတင်ခဲ့သည့်အချိန်တိုင်း, အော်ဂဇင်ငါ့ကိုတစ်ခုခုမှားမဟုတ်သောအဖြစ်မှန်မှငါ့ကိုနှိုးလိမ့်မယ် ဒါကတကယ့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲ၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကဒီတစ်လျှောက်လုံးဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်။ မမှန်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုအသက်ဆက်ရှင်စေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ကျွန်တော့် sllllloowwwwwlyyy တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ငါစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်တစ်လလွန်ခဲ့တဲ့ 13% လျော့နည်းစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ ထိုအလုံလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ရောဂါလက္ခဏာတွေရဲ့သဘောသဘာဝကိုဖော်ပြပြီးဒီ roller coaster အကျိုးသက်ရောက်မှုကဒီဖြစ်စဉ် / ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Reboot လုပ်စဉ်စိတ်ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာပုံမှာပြင်းထန်သောဆေးဝါးများအနေဖြင့်အလွန်ပြင်းထန်သောဆေးဝါးများသောက်သုံးပြီးနောက်မည်သို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်းအတိအကျဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကပြောတာကမှောင်မိုက်တဲ့ကာလဟာပိုမိုပေါ့ပါးလာတယ်၊ မကြာခဏလျော့နည်းလာတယ်၊ သင်ဆုတ်ခွာခြင်းအားဖြင့်ရှေ့ကိုလျှောက်လာတာနဲ့အမျှကောင်းမွန်တဲ့ကာလတွေပိုကောင်းလာပြီးမကြာခဏပိုပိုဖြစ်လာတယ်၊
ယောက်ျားတွေ၊ ငါတစ်ချိန်ချိန်မှာငါဘယ်လောက်အထိခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာတောင်မပြောနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် ဦး နှောက်ကွယ်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု ၀ င်များအကြားလူမှုရေးအရမကျွမ်းကျင်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊
အခုဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ရည်းစားနဲ့ကျွန်မဟာမြို့တမြို့တည်းမှာနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်များပြီးဖိစီးမှုခံရတာကြောင့်များသောအားဖြင့်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပေမယ့်အမြဲတမ်းပျော်စရာကောင်းပြီးအောင်မြင်ပါတယ်။ ငါတစ်ခါတစ်ရံကြုံတွေ့ရသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာမှာ PE ဖြစ်သည်။
ပိုအရေးကြီးတာကကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအတွက်၊ ကျွန်မရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာတွေကအရမ်းတိုးတက်လာတယ်။ ငါပြန်ရောက်မလာသေးဘူး၊
အကြံပေးချက်အတိုင်းသွားသည် .. ..MEDITATION သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကြီးမားသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာစိတ်ကိုအတွက်အလေးချိန်ရုတ်သိမ်းပါတယ်။ စိတ်သည်ဤရန်ပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးမဟာမိတ်သို့မဟုတ်အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ရက်လျှင် ၁၀ မိနစ်မျှထိုင်။ သင့်အသက်ကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ငါဒီအလေ့အကျင့်ကိုငါ့နှစ်သစ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်စတင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့တိုးတက်မှုအရှိန်မြှင့်လာတဲ့အချိန်ပဲ။
စိတ်ကိုတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်မှတ်စုတစ်ခု - မနေ့ကငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖတ်တယ်။ သင်၏စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေရန်ကြိုးစားခြင်းသည်သင်၏သွားကိုကိုက်ရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်တူသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စေရန်အာရုံစိုက်ကြပြီးစိတ်သည်သဘာဝနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာလိုက်စားသည်။ ရုံတစ်မိနစ်အဘို့ထိုအရပ်၌ထိုင်နှင့်သင်၏ပခုံးထဲမှာတင်းမာမှုကိုလွှတ်အာရုံစိုက်ပါ။ သူတို့ကိုသင်၏နားထဲသို့ပခုံးတွန်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ပါ။ ဆွဲငင်အားကိုအပြည့်အဝပေးပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုသင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှကျစေနိုင်သည်။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့အကျင့်ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ထပ်တိုးတန်ဖိုးရှိသည့်ဤဆိုဒ်ရှိလူများအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီ site ရှိအကောင်းဆုံးပစ္စည်းကတော့ဒီ fuck ဆိုတဲ့အရာရဲ့အောက်ဆုံးကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားခြင်းပါ။ “ NOFAP (ဒီမှာလထည့်ပါ)” ကိုဘယ်တော့မှမနှိပ်ဘူး။ ' ငါ့ဘဝမှာချည်နှောင်ထားပေမယ့် flatline၊ D2 receptors နဲ့သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေအကြောင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာရေးသားချက်များကိုငါနာရီပေါင်းများစွာဖတ်ခဲ့ရသည်။ ယောက်ျားတွေများများစားစားနောက်ဆုံးမှာကျဆင်းသွားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဆက်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ၁၀ ရက်ထက်မပိုသောယောက်ျားများအတွက်ဤသည်မှာသုတေသနအချက်အချာဖြစ်သင့်သည်။
ဆက်လုပ်ပါ ဦး ။ “ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောသဘာဝတရားရှိသမျှသည်လည်းကွယ်ပျောက်လိမ့်မည်။ ” လင့်ခ် - နီးပါးနှစ်နှစ်။ PIED အောင်မြင်မှုခြောအရာဖြစ်၏။
PMO မှထွက်ခွာခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ဆိုးကျိုးများအပေါ်ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ PIED နှင့် porn အသုံးပြုမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုသင်ပထမဆုံးအကြိမ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့စဉ်ကသင်သည်သူတို့၏ပုံသဏ္yearsာန်အရမြန်ဆန်သောညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသောအများအားဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုလူအုပ်နှင့်ဆက်ဆံခဲ့သည်ကိုငါသိ၏။ ထိုအုပ်စုအတွက်ထုတ်ယူခြင်းများသည်တိုတောင်း။ PIED ကိုယ်တိုင်၏ပြproblemနာကိုပုံမှန်နားလည်သည်နှင့်အမျှနောက်ဆုတ်သွားလေ့ရှိသည်။
ငါပထမ ဦး ဆုံးစလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံနိုင်စွမ်းကိုရရှိဖို့အဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကြီးမားသောရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်လပ်မှုများသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်လွှမ်းမိုးပြီးလိင်ဆိုင်ရာမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းထက်ပိုမိုကြီးမားသောပြproblemနာဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယခုတွင်ငါသည် (၂၆) နှစ်အကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး PAWS မှပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်နေသည်။ ငါတစ်နှစ်ကျော်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးလက္ခဏာမှာနက်ရှိုင်းသောစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ကြုံခဲ့ဖူးသမျှအခက်ခဲဆုံးအရာများဖြစ်သည်။ အလားတူရုတ်တရက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာရုန်းကန်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူများစွာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်တော်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်၊ ရာနဲ့ချီတဲ့အလားတူအကောင့်တွေကိုဒီနေရာမှာဖတ်ဖူးတယ်၊ nofap.com, nofap reddit, etc
ငါ reboot ၏ဤရှုထောင့်အပေါ်အလုံအလောက်အလေးပေးမထားသကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ငါစလုပ်တုန်းကငါဟာ“ ရက်ပေါင်း ၉၀” ဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူအဆကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးထုတ်ယူခြင်းရဲ့အရှည်နဲ့ပြင်းထန်မှုအတွက်လုံးဝအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။ ငါရုန်းကန်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များစွာရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကစတင်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်လုံလောက်သောအာရုံစိုက်မှုမရရှိသေးပါ။ ငါ Nofap.com ကိုတက်ကြွစွာငါလူတွေကိုဆုတ်ခွာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပညာပေးဖို့နှင့်ငါ့ဇာတ်လမ်းကိုမျှဝေရန်ကြိုးစားနေသည်။
ငါနှစ်ပေါင်းများစွာလေးလံသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူဖြစ်ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့်ကိုယ့်တော်တော်လေးအကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်က porn ကိုလုပ်နေတာတော့ဘူး။ ငါအရမ်းစွဲလမ်းခဲ့သည်, ငါယနေ့ခေတ်ဒုက္ခအများကြီးရှိခြင်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
lipido ၏ -loss
ယေဘုယျအားဖြင့်အများဆုံးကူညီသောအရာတို့ကိုလေ့ကျင့်ခန်း, ဘာဝနာ, သဘောသဘာဝအတွက်အချိန်, လူမှုရေးနှင့်တူသောအကျိုးရှိသောဖိအားများမှာ အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း။ သင်တို့သည်လည်းဤအရပ်၌အထောကျအကူအကြံပြုချက်အချို့ကိုတွေ့ပါစေခြင်းငှါ: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ် Started နှင့်ငါ့ reboot ရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်
[တစ်ဦး 2015 လေ့လာမှုကနေ]
Post-စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဆိုပါ abstinence ဇာတ်စင်၏အလုပ်များကိုတစ်ခုဖြစ်သည်  ။ post-စူးရှဆုတ်ခွာ [မကြာမီဆုတ်ခွာ၏စူးရှသောအဆင့်တွင်အပြီးစတင်နှင့် relapse တစ်ဘုံအကြောင်းအရင်း17] ။ အများအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်ပေးသောစူးရှရုပ်သိမ်းရေး, Post-စူးရှဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ (ယက်) မတူဘဲများသောအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ ၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေလည်း [တစ်ခုချင်းစီကိုစွဲလမ်းများအတွက်တိကျသောရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည်ဖို့လေ့ပေးသောစူးရှသောဆုတ်ခွာမတူဘဲအများဆုံးစှဲများအတွက်အလားတူဖြစ်လေ့1].
ဤရွေ့ကား [Post-စူးရှဆုတ်ခွာ၏ရောဂါလက္ခဏာတချို့ရှိနေပါတယ်1,18,19]: 1) စိတျအပွောငျးအလဲ; 2) စိုးရိမ်ပူပန်; 3) စိတ်တိုတာတွေ; 4) variable ကိုစွမ်းအင်; 5) အနိမ့်စိတ်အားထက်သန်မှု, 6) variable ကိုအာရုံစူးစိုက်မှု, နှင့် 7) အိပ်ပျော်ခြင်းနှောင့်အယှက်။ Post-စူးရှဆုတ်ခွာ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကအတော်များများ [စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူထပ်, ဒါပေမယ့် Post-စူးရှဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေတဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်1].
ဖြစ်ကောင်း Post-စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်. နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးအကြီးဆုံးတက်2နှစ်ကြာရှည်နိုင်သည့်၎င်း၏ကြာရှည်ကြာချိန်သည် [1,20] ။ အဆိုပါအန္တရာယ်လက္ခဏာများလာများနှင့်သွားကြဖို့လေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ [သာနောက်တဖန်ဝင်တိုက်ရ, 1 ရက်သတ္တပတ်မှ2အဘို့အဘယ်သူမျှမလက္ခဏာတွေရှိသည်ဖို့ပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူး1] ။ လူတွေကသူတို့ Post-စူးရှဆုတ်ခွာ၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးသဘာဝအဘို့ပြေးလမ်းအခါ relapse ၏အန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းသောအခါဤဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့အတွေ့အကြုံက client များ Post-စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူရုန်းကန်သောအခါသူတို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို catastrophize လေ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူတို့ဟာသူတို့တိုးတက်မှုအောင်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ အဆိုပါသိမြင်စိန်ခေါ်မှု To-ရက်သတ္တပတ်တပတ်-သူတို့၏တိုးတက်မှုတစ်လလထက်တစ်ရက်-to-တစ်ရက်သို့မဟုတ်တိုင်းတာရန် clients များအားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။